Iindaba - 2020 inkokeli yemithombo yokukhanya esempilweni-i-ShineOn ihamba nawe
2020 inkokeli yemithombo yokukhanya esempilweni-i-ShineOn ihamba nawe
I-2020 inkokeli yemithombo yokukhanya esempilweni-i-shineon ihamba nawe
Unyaka we-2020 uye wabona ubungqina obuninzi bendalo. Kwinkqubo yokulungelelanisa kwakhona phakathi kwendoda nendalo, uMboniso weSibane wase-Guangzhou, okhe warhoxiswa phantse iinyanga ezintathu, ekugqibeleni waqalisa. UShinon uhlala enamathele kwindlela yobuchwephesha 'yokukhanya okunempilo'. 'Njengenkokeli yemithombo yokukhanya esempilweni', uShineon ubonise iimveliso zijolise ekukhonzeni iimfuno zabathengi kwimithombo yokukhanya ekumgangatho ophezulu.
IHolo leMiboniso lePazhou 10.2 C02 yindawo yamaShineon, ebonisa uthotho lweemveliso ze-shinon.
U-Shineon ucebise umbono opheleleyo wokukhanya okusempilweni kwangoko ngo-2016, kwaye wakhokela ekuboniseni iimveliso ezigcweleyo ngo-2017. Ngoku iye yagqitywa ngokuqhubekekayo yaphoswa kuthotho lwezinto ezine zakudala: Uthotho oluthandekayo ngamehlo, uthotho lokhuselo lwamehlo , Uthotho lweLanga, kunye nomdlalo bhanyabhanya kunye nomabonwakude. La manqaku mane asekwe kwiimfuno zabathengi kunye neemeko zesicelo ezihambelanayo, enika umdlalo kwizibonelelo ezahlukeneyo zothotho lokukhanya okugcweleyo. Inqaku eliqhelekileyo kukusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nokuba sempilweni.
* Uthotho lweRa98 Kaleidolite lunezibonelelo zokuhanjiswa kombala okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu kunye nokugcwala okuphezulu.
* Uthotho lokhuselo lwamehlo luneempawu zokuqhubeka okuhle kokubonakala kunye nokukhanya okuluhlaza okwamandla amancinci.
Ihlala isetyenziselwa ukufundisa imifanekiso ukukhusela ngcono ukubona kwamehlo.
* Ukukhanya kwelanga kutholakala ngcono ngombala ngenxa yohlobo lwaso olu-violet lusondele elangeni.
Ihlala isetyenziswa kwimeko ezinje ngokukhula kwezityalo, inzalo kunye ne-antibacterial.
* Uthotho lokukhanya kwesitudiyo sinesalathiso esiphakamileyo se-TLCI, esifanelekileyo kwizicelo zokukhanyisa ngokufota.
Iimveliso ze-COB yenye yeemveliso eziphambili zikaShineon. Ukunamathela kumxholo wobunjani obuphezulu, ukusebenza okuphezulu, kunye nemithombo yokukhanya esempilweni, iphumeze ngokulandelelana isibuko sealuminium COB uthotho, uthotho lweCOB uthotho, uthotho olupheleleyo lwee-COB, kunye nochungechunge lobushushu be-COB ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo.
* Uluhlu lweAluminiyam ye-COB inezibonelelo zokukhanya okuphezulu kunye nokuqhuba okuphezulu kobushushu;
* Uthotho lweeCB zeCeramic zinezibonelelo zokuxhathisa koxinzelelo oluphezulu kwaye akukho bungozi bokuchazwa;
* Uthotho olupheleleyo lwe-COB lunezibonelelo zokonakaliswa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, ukukhanya okuphezulu kokukhanya, kunye nokuhanjiswa kombala ngaphandle kokugqwetha;
* Iimveliso zobushushu bombala wee-COB zinezibonelelo zoluhlu olubanzi lwesicelo samandla, uluhlu olubanzi lokuhlengahlengisa umbala, i-CRI ephezulu kunye nokusebenza okuphezulu okukhanyayo. Zingasetyenziswa kwimiboniso eyahlukeneyo enjengokukhanyisa ekhaya, indawo yokuthenga ezivenkileni, iimyuziyam, amabala emidlalo, njl.
Utshintsho lombala we-SHINEON uhlengahlengiso lwamaqondo obushushu e-COB
Kwindawo efanayo, iziphumo ezahlukeneyo zeCRI zithelekiswa
Iqela le-R & D lobungcali le-Shineon libonelela ngesiqinisekiso esomeleleyo sokwahluka kwemveliso kunye nokusetyenziswa kwemeko ezininzi, ezinje ngothotho lweemveliso ze-UV, uthotho lwefowuni, uthotho lwemodyuli ye-DOB, njl, ezinoluhlu olubanzi lwezicelo zentengiso. Ngokusekwe kwi-R & D eyomeleleyo ye-R & D kunye nemveliso, sinokubonelela abathengi ngesisombululo esenziwe ngokwezifiso kwimithombo ekhethekileyo yokukhanya.